28 Nov 2018 . 3:22 PM
Pine 24 တဲ့။ တူညီတဲ့ လူသားတွေထဲက မတူညီတဲ့ Character တွေ စုဆုံရာ Minimalist ဆန်ဆန် မြို့ပြညတွေကို ရှာဖွေလို့ရမယ့် တစ်ခုတည်းသော နီယွန်မီးရောင်တွေနဲ့ ကမ္ဘာလေး။
Pine 24 ရဲ့ ဝင်ပေါက်တံခါးဝကို တွန်းဖွင့်ဖွင့်ချင်းမြင်လိုက်ရတာက Neon Ligh ခရမ်းဖျော့ရောင်နဲ့ Same Same but Different တဲ့။
တူညီတဲ့ ခြားနားသူတွေကို တစ်သီးတစ်ခြားထဲ တွေ့ရမယ့် ရန်ကုန်ရဲ့ အထာအကျဆုံး ခေတ်သစ် Bar လေး။
လွန်ခဲ့တဲ့ အောက်တိုဘာတစ်ညမှာ ရန်ကုန်မြို့ရဲ့ ထိတ်ထိတ်ကြဲ မော်ဒယ်လ် M Seng Lu ကိုယ်တိုင် ကျင်းပတဲ့ Halloween Party က စပြီး လူတွေကြားထဲ နာမည်ကြီးခဲ့တဲ့ Pine 24 ဆိုတာ နာနတ်တောလမ်း နံပါတ် ၂၄ ကို အကြောင်းပြုပြီး ပေးခဲ့တာဆိုရုံကလွဲ အဖြူရောင်ခပ်များများ၊ အပြင်အဆင် ခပ်ရှင်းရှင်းနဲ့ လွင့်စရာ မျောစရာ…
လမ်းမကြီးနဲ့ ကားတွေကို မှန်တံခါးခပ်ကျဲကျဲ အကွက်တွေကြားက ငေးစရာ လွင့်စရာ…
လူသူရှုပ်ရှုပ်မြို့ပြညတွေက ပြေးထွက်စရာ နေရာလေးတစ်ခုအဖြစ် အသက်ဝင်ခဲ့ပါတယ်။
ညနေ ၄နာရီကနေ ည ၁၂ နာရီထိ သက်ဝင်လှုပ်ရှားတဲ့ ဒီနေရာလေးက ညနေ၆နာရီနောက်ပိုင်းဆို နီယွန်မီးရောင်တွေနဲ့ မြူးလို့ရူးလို့ ကောင်းတဲ့ စိတ်ထွက်ပေါက်နေရာလေးအဖြစ် လူသိများပါတယ်။
နေရာလေးကတော့ အထာကျပါရဲ့? စားသောက်စရာတွေအနေနဲ့ဆိုရော?
Pine 24 ရဲ့ Specialized Drinks က ရောင်စုံအရသာစုံ ရီဝေစေမယ့် Cocktail တွေပါ။ နာမည်အကြီးဆုံး Signature Special Cocktail ကစပြီး နာမည်ဆန်းဆန်းနဲ့ စိတ်ကိုမြူးစေရီဝေစေမယ့် Cocktail ၁၇ မျိုးကျော်ရပါတယ်။ တခြား ဘီယာ၊ Soda ၊ Juice နဲ့ Smoothie တွေကတော့ Alcohol ရှောင်တဲ့သူတွေအတွက် အထောက်ကူပြုမှာပါ။
အစားအစာကတော့ European Foods တွေကိုမှ Pine 24 ရဲ့ ကိုယ်ပိုင်ပုံစံပြန်တီထွင်ထားတဲ့ ဆန်းဆန်းပြားပြား အရသာမျိုးကို ရနိုင်ပါတယ်။
Local Beef ကိုမှ Texture ရော အရသာရောပါ နူးအိနေအောင် Red Wine Sauce နဲ့ ပြင်ဆင်ပေးတဲ့ Carne Asada နာမည်နဲ့ Mexican ရိုးရာ Beef Steak က လူကြိုက်များပါတယ်။
Red Wine နံ့ခပ်သင်းသင်း ဆမ်းချထားတဲ့ အမဲသားရဲ့ နူးညံ့မှုက ပါးစပ်ဖျားထဲဝင်လာတာနဲ့ ချိုမြမြအရည်ရွှမ်းရွှမ်း အညှီနံ့ခပ်ပါးပါးတောင်မပါအောင် ဆွဲဆောင်နိုင်ပါတယ်။ ဈေးက ၈၅၀၀ ဆိုတော့ မဆိုးဘူးလေ။ Steak Sauce မဟုတ်ဘဲ Red Wine Sauce ဆိုတော့ အရမ်းကြီးတော့ မကြိုက်မိပါဘူး။
Pine 24 မှာ ကိုယ်တိုင် ဝက်သားကို ကိုယ်ပိုင် Recipe နဲ့ကြိတ်တဲ့ Sausage ကတော့ နာမည်အကြီးဆုံးပါ။ အမွှေးနံ့သာ Spice တွေပြွမ်းသိပ်နေအောင်မများဘဲ အလုံး ခပ်တုတ်တုတ်နဲ့ အသားအနံ့အရသာ မွှေးသင်းနေတဲ့ Sausage တစ်ပွဲက ဘီယာတစ်ခွက်နဲ့ဆို ဘယ်လောက်တောင် လိုက်ဖက်လိုက်မလဲနော်။
ဒါကတော့ အခရာကိုယ်တိုင်ပါ ထပ်ထပ်စားချင်အောင်ကြိုက်တဲ့ပွဲပါ။ တစ်ချောင်းကို ၄၅၀၀ ပေးရပါတယ်။
Pine 24 ရောက်တဲ့သူတိုင်း အချိန်တကူးတက မိနစ်၂၀ လောက်စောင့်ပြီးကို ထိုက်ထိုက်တန်တန်မစားမဖြစ် စားစေချင်တဲ့အရာက ကြက်ပေါင်သားပါ။ မီးအေးအေးနဲ့ ၃ နာရီလောက် Grilled လုပ်ထားတဲ့ကြက်ပေါင်က အပြင်ခွံကြွပ်မွနေအောင်မွှေးပြီး ငါးကင်ထဲထည့်တဲ့ အဆာပလာလေးတွေကိုဆော့စ်လုပ်ထားပေးတာမို့ Pine 24 ရဲ့ နာမည်ကျော် ကြက်ကင်လို့ပြောရလောက်တဲ့ထိပါ။ ပြောင်းဖူးထောပတ်ကင်နဲ့ ဆိုတော့ အလွန်အကျူးပါပဲ။
အသားကလည်း အရိုးထဲထိနူးအိနေတာဆိုတော့ ရန်ကုန်မှာကြက်သားကိုဒီလောက်စားကောင်းအောင် ပြင်ဆင်နိုင်တာ တကယ်ဆရာကျပါတယ်။
ခုချိန်မှာတော့ မီနူးတွေရော၊ ဆိုင်အပြင်အဆင်ကိုပါသေချာလေးပြန်အဆင့်မြှင့်နေတာမို့ ဒီဇင်ဘာလထဲမှာတော့ Grand Opening လုပ်တော့မယ်လို့သိရပါတယ်။
ဒါပေမယ့် Grand Opening မလုပ်ခင်တည်းကကို ရန်ကုန်မြို့ရဲ့ ဆယ်လီအသိုင်းအဝိုင်းကြားထဲ Pine 24 မှမရောက်ဖူးရင်ခေတ်မမီဘူးလို့ဆိုရလောက်တဲ့ထိ နာမည်ကြီးနေတာမို့ တရက်လောက်တော့ ညချမ်းအချိန်လေး အရောက်သွားပြီး အခရာက ညွှန်ထားတဲ့ Special Item တွေ မြည်းစမ်းကြည့်ပါဦးလို့…
ညနေ ၄ နာရီကနေ ည၁၂ နာရီထိ လူစည်တဲ့ Pine 24 ရဲ့လိပ်စာက အမှတ် ၂၄၊ နာနတ်တောလမ်းမပေါ်၊ Junction Square နားမှာပါ။
အလှနျအကြူး မွူးလို့ကောငျးတဲ့ ဆယျလီတို့ စုံရပျ အထာကကြ Pine 24
Pine 24 တဲ့။ တူညီတဲ့ လူသားတှထေဲက မတူညီတဲ့ Character တှေ စုဆုံရာ Minimalist ဆနျဆနျ မွို့ပွညတှကေို ရှာဖှလေို့ရမယျ့ တဈခုတညျးသော နီယှနျမီးရောငျတှနေဲ့ ကမ်ဘာလေး။
Pine 24 ရဲ့ ဝငျပေါကျတံခါးဝကို တှနျးဖှငျ့ဖှငျ့ခငျြးမွငျလိုကျရတာက Neon Ligh ခရမျးဖြော့ရောငျနဲ့ Same Same but Different တဲ့။
တူညီတဲ့ ခွားနားသူတှကေို တဈသီးတဈခွားထဲ တှရေ့မယျ့ ရနျကုနျရဲ့ အထာအကဆြုံး ခတျေသဈ Bar လေး။
လှနျခဲ့တဲ့ အောကျတိုဘာတဈညမှာ ရနျကုနျမွို့ရဲ့ ထိတျထိတျကွဲ မျောဒယျလျ M Seng Lu ကိုယျတိုငျ ကငျြးပတဲ့ Halloween Party က စပွီး လူတှကွေားထဲ နာမညျကွီးခဲ့တဲ့ Pine 24 ဆိုတာ နာနတျတောလမျး နံပါတျ ၂၄ ကို အကွောငျးပွုပွီး ပေးခဲ့တာဆိုရုံကလှဲ အဖွူရောငျခပျမြားမြား၊ အပွငျအဆငျ ခပျရှငျးရှငျးနဲ့ လှငျ့စရာ မြောစရာ…
လမျးမကွီးနဲ့ ကားတှကေို မှနျတံခါးခပျကြဲကြဲ အကှကျတှကွေားက ငေးစရာ လှငျ့စရာ…
လူသူရှုပျရှုပျမွို့ပွညတှကေ ပွေးထှကျစရာ နရောလေးတဈခုအဖွဈ အသကျဝငျခဲ့ပါတယျ။
ညနေ ၄နာရီကနေ ည ၁၂ နာရီထိ သကျဝငျလှုပျရှားတဲ့ ဒီနရောလေးက ညနေ၆နာရီနောကျပိုငျးဆို နီယှနျမီးရောငျတှနေဲ့ မွူးလို့ရူးလို့ ကောငျးတဲ့ စိတျထှကျပေါကျနရောလေးအဖွဈ လူသိမြားပါတယျ။
နရောလေးကတော့ အထာကပြါရဲ့? စားသောကျစရာတှအေနနေဲ့ဆိုရော?
Pine 24 ရဲ့ Specialized Drinks က ရောငျစုံအရသာစုံ ရီဝစေမေယျ့ Cocktail တှပေါ။ နာမညျအကွီးဆုံး Signature Special Cocktail ကစပွီး နာမညျဆနျးဆနျးနဲ့ စိတျကိုမွူးစရေီဝစေမေယျ့ Cocktail ၁၇ မြိုးကြျောရပါတယျ။ တခွား ဘီယာ၊ Soda ၊ Juice နဲ့ Smoothie တှကေတော့ Alcohol ရှောငျတဲ့သူတှအေတှကျ အထောကျကူပွုမှာပါ။
အစားအစာကတော့ European Foods တှကေိုမှ Pine 24 ရဲ့ ကိုယျပိုငျပုံစံပွနျတီထှငျထားတဲ့ ဆနျးဆနျးပွားပွား အရသာမြိုးကို ရနိုငျပါတယျ။
Local Beef ကိုမှ Texture ရော အရသာရောပါ နူးအိနအေောငျ Red Wine Sauce နဲ့ ပွငျဆငျပေးတဲ့ Carne Asada နာမညျနဲ့ Mexican ရိုးရာ Beef Steak က လူကွိုကျမြားပါတယျ။
Red Wine နံ့ခပျသငျးသငျး ဆမျးခထြားတဲ့ အမဲသားရဲ့ နူးညံ့မှုက ပါးစပျဖြားထဲဝငျလာတာနဲ့ ခြိုမွမွအရညျရှမျးရှမျး အညှီနံ့ခပျပါးပါးတောငျမပါအောငျ ဆှဲဆောငျနိုငျပါတယျ။ ဈေးက ၈၅၀၀ ဆိုတော့ မဆိုးဘူးလေ။ Steak Sauce မဟုတျဘဲ Red Wine Sauce ဆိုတော့ အရမျးကွီးတော့ မကွိုကျမိပါဘူး။
Pine 24 မှာ ကိုယျတိုငျ ဝကျသားကို ကိုယျပိုငျ Recipe နဲ့ကွိတျတဲ့ Sausage ကတော့ နာမညျအကွီးဆုံးပါ။ အမှေးနံ့သာ Spice တှပွှေမျးသိပျနအေောငျမမြားဘဲ အလုံး ခပျတုတျတုတျနဲ့ အသားအနံ့အရသာ မှေးသငျးနတေဲ့ Sausage တဈပှဲက ဘီယာတဈခှကျနဲ့ဆို ဘယျလောကျတောငျ လိုကျဖကျလိုကျမလဲနျော။
ဒါကတော့ အခရာကိုယျတိုငျပါ ထပျထပျစားခငျြအောငျကွိုကျတဲ့ပှဲပါ။ တဈခြောငျးကို ၄၅၀၀ ပေးရပါတယျ။
Pine 24 ရောကျတဲ့သူတိုငျး အခြိနျတကူးတက မိနဈ၂၀ လောကျစောငျ့ပွီးကို ထိုကျထိုကျတနျတနျမစားမဖွဈ စားစခေငျြတဲ့အရာက ကွကျပေါငျသားပါ။ မီးအေးအေးနဲ့ ၃ နာရီလောကျ Grilled လုပျထားတဲ့ကွကျပေါငျက အပွငျခှံကွှပျမှနအေောငျမှေးပွီး ငါးကငျထဲထညျ့တဲ့ အဆာပလာလေးတှကေိုဆော့ဈလုပျထားပေးတာမို့ Pine 24 ရဲ့ နာမညျကြျော ကွကျကငျလို့ပွောရလောကျတဲ့ထိပါ။ ပွောငျးဖူးထောပတျကငျနဲ့ ဆိုတော့ အလှနျအကြူးပါပဲ။
အသားကလညျး အရိုးထဲထိနူးအိနတောဆိုတော့ ရနျကုနျမှာကွကျသားကိုဒီလောကျစားကောငျးအောငျ ပွငျဆငျနိုငျတာ တကယျဆရာကပြါတယျ။
ခုခြိနျမှာတော့ မီနူးတှရေော၊ ဆိုငျအပွငျအဆငျကိုပါသခြောလေးပွနျအဆငျ့မွှငျ့နတောမို့ ဒီဇငျဘာလထဲမှာတော့ Grand Opening လုပျတော့မယျလို့သိရပါတယျ။
ဒါပမေယျ့ Grand Opening မလုပျခငျတညျးကကို ရနျကုနျမွို့ရဲ့ ဆယျလီအသိုငျးအဝိုငျးကွားထဲ Pine 24 မှမရောကျဖူးရငျခတျေမမီဘူးလို့ဆိုရလောကျတဲ့ထိ နာမညျကွီးနတောမို့ တရကျလောကျတော့ ညခမျြးအခြိနျလေး အရောကျသှားပွီး အခရာက ညှနျထားတဲ့ Special Item တှေ မွညျးစမျးကွညျ့ပါဦးလို့…
ညနေ ၄ နာရီကနေ ည၁၂ နာရီထိ လူစညျတဲ့ Pine 24 ရဲ့လိပျစာက အမှတျ ၂၄၊ နာနတျတောလမျးမပျေါ၊ Junction Square နားမှာပါ။